जंगल राजमा अझै चल्दैन नेपालको कानुन, पीडित युवतीहरु नै ‘मारिन’ सक्छन् ! -
Home Flash News जंगल राजमा अझै चल्दैन नेपालको कानुन, पीडित युवतीहरु नै ‘मारिन’ सक्छन् !
एजेन्सी । जंगलमा फिरन्ते जीवन बिताउँदै आएको राउटे समुदायमाथि हुँदै आएको युट्युव आतंक, एक समय खुब चर्चामा ल्याइएको टिकटक प्रकरण हुँदै युवतीहरुलाई होटलमा ल्याएर बन्धक बनाउनेसम्मको विकृत अवस्था उजागर छ । यसै पनि राउटे समुदाय केही डलररुपी समाजसेवीहरुको लागि दया र याचनाको गतिलो माध्यम बनिरहेको थियो । जंगलको राजा समेत भनिने यो समुदाय अहिले आएर शहरीया गिद्धे नजरको शिकार बनेको छ ।
दैलेखबाट केहीदिन अघिमात्रै सुर्खेतमा आएको राउटे साम्राज्यमा नराम्रो प्रहार भएको छ । मूलधारको मिडियामा खासै चासोको विषय भन्न नसकेको राउटेहरूको वतर्मान युट्युबरहरूको गतिलो खुराक बनिरहेको थियो, विगत केही समययता । ‘पैसा छुदाँ पनि पाप लाग्छ’ भन्ने मान्यता राख्ने राउटेहरू युट्युबरहरूका लागि डलर कुम्ल्याउने स्रोत बनिरहेका थिए, छन् ।
आम मानिससँग दोहोरो सम्बाद समेत गर्दैन थिए, कुनैबेला राउटेहरू । तर, समयले निकै कोल्टे फेरि सकेछ । अहिले उनीहरूसँग सनसनी पूर्ण अन्तरवार्ता हुन्छ । टिकटकले राउटे समुदायकी एक युवतीलाई एकाएक स्टार बनाईदियो । उनी आफ्नो भिन्न लवजका कारण चर्चामा आइन् । उनको बोल्ने स्टाइल, फेसियल एक्सप्रेसन, पहिरनका कारण उनी चर्चामा आएकी थिइन्, यो त राउटे समुदायको संस्कृति र सम्पति थियो ।
भिडियोमा पहिलो युवती भन्छिन्, ‘डिस्टब भयो के’। भिडियो बनाइरहेका अर्थनग्न पुरूष ‘चमन’ मदिराको मातमा गुन्गुनाउछन्, ‘सुवास तिमी हौ’। उनी मेरी बुढी भन्दै संवेदनशील अंग छुन खोज्छन् । असजिलो भन्दै युवतीले भनेकी छन्, ‘भयो के दाई’ । फेरि सोध्छन्, मेरो नाम के रे ? सुतिरहेकी युवती आफ्नो नाम बताउँछिन् । ‘ए तँ चाहिँ…, त मेरो बहिनी हैन’ उनी अघि भन्छन् । यो चाहिँ … पहिलो युवतीको नाम लिन्छन् । जसलाई चमनले ‘श्रीमती’को रूपमा सम्बोधन गरेका छन् ।
उनी तिनै युवती हुन्, युट्युबरहरूको अन्तरवार्तापछि सर्वत्र छाएकी थिइन् । पछि टिकटकले उनलाई भाइरल नै बनाइदियो । भिडियोमा अस्लिल हर्कत गरिरहेका युवक मदिराको मातमा गीत गाउन थाल्छन्, ‘फेरि फेरि नाइ न भन्नू ल ।’ उनीहरूमाथिको हर्कत यतिमा सिमित छैन, मेरी बुढी रिसाएकी छन् । जा ‘छ्याङ’ रक्सी ल्याउ । किस गरन बुढी । सँगै सुत्छन् । युवतीको अनुहार हाइलाइट गर्छन् । उनको स्तन छुन्छन् ।
५ मिनेट ३० सेकेण्डको भिडियोको अन्त्यतिर एक अर्का युवा देखा पर्छन् । दोस्री युवतीको काँधमा हात राख्दै भन्छन्, ‘यो मेरी गर्लफ्रेण्ड’ । सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र युट्युबमासमेत अपलोड भिडियो सुर्खतस्थित होटलमा खिचिएको हो । जहाँ टाउटे युवतीहरूले मदिरा सेवन गराएको स्पष्ट हुन्छ । घटनामा सलंग्न तीन जना पक्राउ समेत परिसकेका छन् । ती मध्ये एक जना होटल सञ्चालक समेत हुन् ।
अहिले बाहिर आएको यो प्रकरणलाई सामान्य रूपमा लिइनु हुँदैन । पछिल्लो समय युट्युव, टिकटकलगायतका सामाजिक सञ्जालमा भाइरल राउटे समुदायका युवतीमाथि पछिल्लो समय दुव्र्यवहार बढ्दै गएको छ । युट्युव, टिकटक बनाउने नाममा राउटे बस्ती पुग्नेहरुले उनीहरुलाई मदिरा सेवन गराउने, अश्लिल शब्दहरु बोल्न लगाउने, यौन दुव्र्यवहार गर्नेलगायतका नराम्रा कामहरु गर्ने गरेका छन् ।
यो निर्दोष राउटे युवतीमाथि गरिएको जघन्य अपराध हो । यो प्रकरणको पछाडि धेरै पृष्ठभूमि जोडिएका छन् । पहिलो, उनीहरुको सोझोपनको नराम्रो फाइदा युवाहरूले उठाए । उनीहरुमाथि कडा कारबाही हुनुपर्छ । यो सिंगो राउटे समुदाय र महिलामाथि भएको प्रहार हो । र दोस्रो, उनीहरू यौनकर्मी युवतीको रूपमा प्रयोग त भइरहेका छैनन् ? भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ । यसअघि पनि पैसाको प्रलोभन देखाएर उनीहरुमाथि प्रहार भइरहेको थियो । पछिल्लो घटना त सतहमा आएको मात्रै हो ।